Fanaraha-maso ny haintany any atsimon’i Madagasikara - 2020 | UNICEF Madagasikara
Fanaraha-maso ny haintany any atsimon’i Madagasikara - 2020
Antontanisa isam-bolana avy amin’ny rafi-panaraha-maso ireo famantarana momba ny haintany nosintonina tamin’ny sary azo avy amin’ny zanabolana
Ny faritra atsimon’ i Madagasikara no mijaly rano indrindra eto amin'ny firenena ary mizaka ireo voka-dratsy goavan’ny fiovan'ny toetr'andro. Porofon’izany: mihamatetika sy mihamahery vaika hatrany ny haintany. Ilaina tokoa ny famaritana an-tsarintany sy ny faminaniana ny fitrangan’ny haintany mba hisorohana na hanalefahana ny tsy fahampian-drano sy ny mosary
Noho izy ahafahana manaraka akaiky ny rotsakorana sy ny fitombon’ny zavamaniry, ny sary an-janabolana ahafahana manaraha-maso bebe kokoa ny haintany ary manome fanairana haingana mba hanatsarana ny fandrafetana drafitrasa.
Amin'izao fotoana izao, tsy misy rafi-panaraha-maso nasionaly ny haintany eto Madagasikara. Ny fisian’izany anefa no manampy amin’ny fanombatombana ny loza mety hitranga ary mpahalala ireo mpiara-miombon’antoka, ireo mpanao asa soa ary ny tompon’andraikitra mba hanamorana ny fanomanana sy ny fepetra fanalefahana ny haintany
Ny UNICEF sy ny Ivotoeram-pikarohan’ny vondrona eoropeana ary ny Ministeran’ny rano, ny fidiovana sy ny fanadiovana dia niara-namolavola rafi-panaraha-maso ny haintany any atsimon’i Madagasikara. Ity rafi-panaraha-maso ity dia mifototra amin'ny tondro momba ny haintany (ny rotsakorana sy ny tsy fahatomomban’ny fitomboan’ny zavamaniry / NDVI) nosintonina tamin’ny sary avy amin’ny zanabolana (CHIRPS ary MODIS).
Avy amin'ireo akoram-pahalalana vokarin’ny zanabolana ireo no tsoahina ny fivoarana ara-tantaran’ny haintany . Io fivoarana teo amin’ny lasa io avy eo no raisina ho filamatra ka ampitahaina amin’ny toe-java-misy isan-taona ankehitriny mba handrefesana ny herin’ny haintany. Misy biletà fanairana momba ny haintany mivoaka isam-bolana ary apariaka amin’ny mpiara-miombon’antoka rehetra.
Mba hahazoanao ireo biletà ho avy amin’ny mailaka, misorata anarana amin’ny lisitra mpandray ny "email" avy aminay
Sokafy ilay singa hahafahanao maka izay tatitra mahaliana anao
Safidy Safidy azo atao Numéro 25 - Décembre 2020 Numéro 24 - Novembre 2020 Numéro 23 - Octobre 2020 Numéro 22 - Septembre 2020 Numero 21 - Aout 2020 Laharana 20 - Jolay 2020 Laharana 19 - Jona 2020 Laharana 18 - May 2020 Laharana 17 - Aprily 2020 Laharana 16 - Marsa 2020 Laharana 15 - Febroary 2020 Laharana 14 - Janoary 2020
Vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny MEAH sy ny UNICEF : Fiarabe mpitatitra rano miisa telo entina hanamafisana ny fahafaha-manaon’ny JIRAMA momba ny famatsian-drano eto amin'ny tanànan’ Antananarivo sy Toamasina.
Ny rafitra famatsian-drano fisotro madio antoky ny aina
Ny fahatongavan'ny rano fisotro madio sy ny fandalana ny fahadiovana ao amin'ny sekoly ao Antsihenamasy dia nampihena ny tahan'ny fivalanan'ny zaza
Fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny hetsika Faritra « Analanjirofo Madio » hiadiana amin'ny fanaovana maloto ankalamanjana